မှန်ကန်စွာ centrifugal မှုန်ရေမွှားလေမှုတ်စက်ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? - တရုတ် Changzhou Dame ဆေးဝါးပစ္စည်းကိရိယာ
မှန်ကန်စွာ centrifugal မှုန်ရေမွှားလေမှုတ်စက်ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒီပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုထားသူမည်သူမဆို centrifugal မှုန်ရေမွှားလေမှုတ်စက်အလုပ်အတွက်အစွမ်းထက်အခန်းကဏ္ဍနိုင်သည်ကိုသိထားရမည်, ခြောက်သွေ့မှုနှုန်းအလွန်မြန်ခြင်း, အစအများအားဖြင့်အပူကိုအထိခိုက်မခံမူးယစ်ဆေးခြောက်သွေ့ကုသမှုတွင်အသုံးပြု, ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအာမခံချက်ပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်မှုန်ရေမွှားလေမှုတ်စက်လည်း microcapsules ပြင်ဆင်ထားရန်အသုံးပြုရနိုင်ပြီး, ကောင်းတစ်ဦးကိုကုသအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကျနော်တို့ကိုရှေးခယျြပါသနည်း
ရွေးချယ်မှုများအောင်သည့်အခါလူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး, zui အမြဲထုတ်ကုန်အမျိုးအစားပေါင်းမြောက်များစွာနှိုင်းယှဉ်နေပါတယ်။ ဒါဟာသင်ဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပိုမိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖြစ်ကြပြီးတူညီတဲ့ function ကိုများအတွက်လျော့နည်းအာကာသလိုအပ်သည့်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်, ဖြည့်ဆည်းသောသူတို့ပစ္စည်းတွေကိုရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုသတိရဖို့ကအရေးကြီးတယ်။
ကျနော်တို့မှုန်ရေမွှားအခြောက်ခံစက်များအဘို့အစျေးဝယ်နေစဉ်ဒုတိယပြဿနာ, zui ပိုကောင်းပိုပြီးအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်ကြောင်း device များအတွက်ရှာဖွေနေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်, ကအော်ပရေတာများ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကယျတငျနိုငျသောလုပ်ကိုင်ရန်ပိုမိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
Fourthly အသုံးပြုသူများပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများရှင်းလင်းနှင့်ရွေးချယ်ထားကိရိယာများ၏ nozzle ရဲ့အရွယ်အစားလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသေချာစေရန်သင့်ပါတယ်။ ဒါကပြောဖြစ်တယ်, ငါတို့ကောင်းကောင်းအလုပ်ပြီးအောင်ကူညီနိုငျသောရေမှုန်ရေမွှားလေမှုတ်စက်သုံးစက်ကိရိယာများကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
သို့သော်သင့်လျော်သောကိရိယာများကိုရှေးခယျြထားရင်တောင်, အမှန်တကယ်လျှောက်လွှာအတွက်အချို့သောပြဿနာများရှိစေနိုင်သည်။ ဤအချိန်တွင်ကျနော်တို့ re-adjust ကြောင့်ထို့နောက်မှုန်ရေမွှားလေမှုတ်စက်၏ setting ကိုထိုကဲ့သို့သောနို့တိုက်ကျွေးရေးမြန်နှုန်းရှိမရှိအဖြစ်မည်သည့်ပြဿနာမျှရှိပြီး, အပူချိန် setting ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည် ဖြစ်. , စသည်တို့ကိုပစ္စည်းကိုယ်နှိုက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိမရှိထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်နှင့်
Post ကိုအချိန်: သြဂုတ်-08-2018
NO ။ 10, အဆိုပါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဇုန်, ZHONGJIANG, ZHENGLU Town, Tian ခရိုင်, CHANGZHOU, Jiangsu ပြည်နယ်, တရုတ်။
centrifugal မှုန်ရေမွှားလေမှုတ်စက်ကောရွေးချယ်ဖို့ကိုဘယ်လို ...